musha United Kingdom Vatapi venhau Christiane Amanpour Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Christiane Amanpour's Biography inoratidza Chokwadi pane yake yehucheche nyaya, hupenyu hwepakutanga, chokwadi chemhuri, vabereki, hupenyu hwehukama (murume, vana), mararamiro, uye hupenyu hwega.
Zvichitaurwa zviri nyore, ndiko kuongorora kwakazara kwenyaya yehupenyu hwake kubva makore ake ekutanga kusvika paakazozivikanwa semutambi wepa terevhizheni.
Haichisiri nhau yekuti iye ndiye mumwe akanakisa TV Anchors munyika. Ndichiri mashoma mashoma akazara mashanduro Christiane Amanpour's Biography iripo kunze uko, tafunga kugadzirira edu. Pasina kunonoka kwakawanda, ngatitorei bhora kutenderera.
Christiane Amanpour Childhood Nyaya:
Kune anotanga biography, chikamu chezita rake chairo ndi'Maria Heideh 'uye iye mutori wenhau weBritish-Iranian ASI wenyika yeUS.
Christiane Amanpour akaberekwa pazuva re12th raNdira 1958 kuna baba vake vePersia, Mohammad Taghi Amanpour, uye amai veChirungu, Patricia Anne (née Hill) muEaling, London. Mutariri weTV akaberekerwa muEaling idunhu reWest London, England.
Wako waunofarira CNN International Anchor ndiye dangwe pavana vaviri vakazvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake. Makore mashoma mushure mekuzvarwa kwake, Mhuri yaChristiane Amanpour akatama kubva kuLondon achienda kumusha kwababa vake, Iran.
Ikoko, akararama hupenyu hunofadza pamwe nasisi vake kusvika ave negumi nerimwe. Semusikana mudiki, Amanpour ainakidzwa nehupenyu hwakakomberedzwa. Chokwadi chinofanira kutaurwa, makore ake ekutanga akazadzwa nekunyaradzwa kukuru uye mufaro.
Mhuri yaChristiane Amanpour Kubva:
Kutanga uye pamberi pezvese, iye anobva kumhuri ine vanhu vemarudzi mazhinji. Kutarisa mumadzitateguru ake kunoratidza kuti vabereki vaChristiane Amanpour (kubva padivi pababa vake) ndevekwaIran apo mhuri dzemadzimai emhuri dzinobva kuBritain.
Nekuda kwerudzi rwake rwakasiyana uye midzi yemhuri, mutori wenhau weBritish-Iranian anonyatsogona kutaura Chirungu nePersia.
Pakutanga, akave nerombo rakanaka kudzidza nezvetsika yeropa rake achiri kukura. Saka zvakanaka kufunga kuti zvakaitika kuna Christiane Amanpour muIran neEngland zvakapfuura nguva zvichimuumba kuva mukadzi waava.
Christiane Amanpour Mhuri Yemhuri:
Kubva kubva paudiki, yako yaunoda CNN anchor yaive nekwaniso kune zvese zvaaida semusikana mudiki.
Kana iwe waisaziva?… Christiane Amanpour akaberekerwa mumhuri yakapfuma. Chokwadi ichi, kubva pamakore ake ekutanga, aigara achitsanangura ramangwana rakajeka kwaari.
Kudzoka muzuva, vabereki vaChristiane Amanpour vaikwanisa kumupa rutsigiro rwemari nehunhu hwaaida kuti akunde muhupenyu. Kuve nekuvimbiswa zvizere nerutsigiro rwemhuri yake, aive akagadzirira zvakasimba kutarisana nematambudziko ehupenyu zvakananga.
Hupenyu hwepakutanga hwaChristiane Amanpour:
Chokutanga, ndeyekuti akapedza makore mashoma ekutanga muIran. Hupenyu hwepakati-kumabvazuva hwainakidza sezvo ramangwana CNN mukurumbira akaita shamwari dzakawanda kumba uye muchikoro chezuva rake.
Pazera remakore gumi nerimwe, vabereki vaChristiane Amanpour vakasarudza kumunyoresa kuchikoro chebhodhingi.
Pasina nguva iri kure, yega yega yemhuri yake akatama kubva kuIran kuenda kuEngland. Mhuri yaChristiane Amanpour yanga yasarudza kugara muIran asi haina kukwanisa kudzokerako nekuda kwehondo yaive iri kuuya pakati penyika neIraq.
Aive zviitiko izvi zvisingaite uye hondo zvakakonzera kushingairira kwake kuve mutapi venhau.
Christiane Amanpour Dzidzo:
Kuti azvigadzirire iye mune ramangwana, ramangwana terevhizheni anotungamira akanyoresa kuHoly Cross Convent, chikoro chevasikana vese muBuckinghamshire, England.
Kuchikoro, Christiane Amanpour aive akangwara mwana aiita mamakisi akanaka uye akateerera zvidzidzo zvake.
Pazera remakore gumi nematanhatu, akazoendeswa kuchikoro cheRoman Catholic chinonzi New Hall Chikoro muChelmsford. Paakapedza kudzidza, Christiane Amanpour akatamira kuUnited States kunodzidza kosi yake yekurota - inova Utori venhau.
Iranian-akaberekerwa Iranian akatanga kudzidza utapi venhau paYunivhesiti yeRhode Island iri mudunhu reUS muNew England. Shure kwaizvozvo, akapedza kudzidza aine BA degree mujenali kubva kuYunivhesiti mugore ra1983.
Christiane Amanpour Biography - Yekutanga Basa Rehupenyu:
Iye munguva pfupi-yekuve mutori venhau aiziva zvaaida kunyangwe asati apedza kudzidza. Ndichiri kuchikoro, akatanga kushanda muindastiri yekutaurirana.
Christiane Amanpour aive mhando uyo asina kupa chero nzvimbo yehusimbe. Kare kumashure, akashanda seyemagetsi grafiki dhizaini yemunharaunda yekutengesa TV chiteshi NBC.
Achangopedza kudzidza kuYunivhesiti, Amanpour akawana basa neCNN. Akatanga kubva kumahombekombe nekushanda seanopinda-chikamu chikamu mubatsiri padanho repasi rose rekushandira.
Munguva yebasa rake rekutanga neCNN, Amanpour airatidzira ngano uye hunhu hwemutori wenhau ane hushingi sezvaaifukidza zviitiko munzvimbo dzine njodzi uye dzine njodzi.
Christiane Amanpour Bio - Mugwagwa kune Mukurumbira Nhau:
Sevashandi vejunior, chinangwa chake kwaive kusvika kumusoro chaiko. Izvo zvinogona chete kuuya nekuita zvisingafungidzike. Mukuda kwake kuve anotyisa Mutori wenhau, Amanpour akatora mabasa ekuvhara zviitiko zvinoverengeka zvinotyisidzira hupenyu.
Kutanga, akapihwa basa rekufukidza iyo Persian Gulf hondo. Gare gare, akafukidza hondo yeBosnia kusanganisira vamwe.
Chokwadi ndechekuti, ruzivo rwake nekuzivisa kubva kunharaunda yehondo kwainge kusiri nyore.
Iwe waive iye mhando aigara achisundidzira nekuda kwayo- chikonzero chiri icho, iye aifanira kuve nechinangwa nemishumo yake. Iye aive mhando uyo aisimbirira kupa chaiko chokwadi mune zvese zviitiko.
Christiane Amanpour Biography - Iyo Kumuka kune Mukurumbira Nhau:
Munguva yehondo yeBosnia, vatsoropodzi vazhinji vakapomera mutori venhau weBritish-Iranian nekuburitsa mishumo isiriyo. Vamwe vavo vaiti akaendesa mishumo yake achifarira maMoslim eBosnia.
Zvisinei, Christiane Amanpour akamira asingatyi mukutarisana nekushoropodzwa nehondo. Pasina nguva, akazove zita remumba kushinga kwake mukuzivisa kubva kunharaunda yakatambudzwa.
Achikurumidza kusvika kunguva yekuburitsa nhoroondo yehupenyu hwake, Christiane Amanpour akadhindisa zita rake mune rondedzero ye zviso zvakakura zve CNN hunhu.
Unoziva here?… Ndiye aive wekutanga kunyora tsamba kubvunzurudza vatungamiriri vePakistani neAfghan mushure mekurwiswa kwa9 / 11.
Pasina kupokana, hunhu hwake uye hushingi hunhu hunoremekedzwa zvikuru nemahange makuru eCNN saChris Cuomo uye Don Lemon. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Christiane Amanpour Murume, uye Vana:
Kutarisisa biogi yaChristiane Amanpour inoratidza kuti anga achibatanidzwa muhukama hwakawanda hwekudanana kubva paakatanga kufarirwa.
Kutanga, nezvehukama hwake, isu tinoziva ndeyekuti iye akambodanana naPaul March uye mutori wenhau redhiyo pamwe naLuc Delahaye murwi wemifananidzo.
Makore mashoma mushure mehukama hwake hwekupedzisira, akasangana naJames Philip Rubin, Munyori Wemubatsiri weNyika Yezve Ruzhinji.
Waizviziva here?… James Philip aive zvakare chipangamazano zvisina kurongwa kune vaimbova Mutungamiriri Barrack Obama uye aimbova Sekiritari weUnited States Hillary Clinton.
Amanpour akasangana naJames Philip muBosnia mugore ra1997 uye pasina nguva akadanana naye. Mwaka unotevera, shiri dzerudo dzakatora nhanho inotevera yekusungira pfumo semurume nemukadzi.
Nekudaro, mugore re2018, ivo vakaroora vakasaina chikumbiro chekurambana ndokuenda kwavo vakaparadzana.
Ndivanaani vana Christiane Amanpour Vana:
Muchato pakati pemuterevhizheni uye murume wake, James Philip akatungamira mukuzvarwa kwemwana wake mumwechete.
Paakaberekwa, vaviri vacho vakafara kutumidza mwanakomana wavo, Darius John Rubin. Kunyangwe mushure mekurambana kwavo, Amanpour nemurume wake aimbova murume vanogara vachipa nguva yekuitira izvo zvinodiwa nemwanakomana wavo.
Christiane Amanpour Hupenyu hwemhuri:
Imba yakasungwa-svetuka, sekuziva kwedu tese, ndiyo imwe yenheyo nheyo dzinokanganisa ramangwana remwana.
Pano, isu tinopa kwamuri mhuri yaChristiane Amanpour uye nemabatiro avakaita zvakanyanya nyaya yake yekubudirira. Ngatitangei nemukadzi akamubereka.
About Christiane Amanpour Amai:
Mutori wenhau weBritish-Iranian akaberekerwa amai vake veChirungu, Patricia Anne (née Hill). Amanpour's mum (Patricia) akasangana nababa vake paakaenda kuIran.
Neraki, vaviri ava vakaroora ndokubereka Christiane Amanpour nasisi vake. Kutenda kuraira kwaamai vake, amai vedu venhau vane mukurumbira vakakurira kuita mukadzi akanaka.
About Christiane Amanpour Baba:
Mumwe munhu anokosha uye asingakanganwiki muhupenyu hwemunyori wenhau weCNN ndibaba vake, Mohammad Taghi Amanpour.
Waizviziva here? ... Aive mukuru wendege weIran anga akapfuma kubva pakutanga chaipo. Simba raMohammad Taghi mune zvematongerwo enyika zveIran raive nebasa rekuona kupona kwemhuri yake mukutarisana nematambudziko eIran.
Nezve Christiane Amanpour Vanun'una:
Chekutanga uye chekutanga, haana hama asi hanzvadzi yechidiki inoenda zita rekuti Lizzy Amanpour. Hapana ruzivo rwakawanda rwunozivikanwa nezve hanzvadzi yaChristiane Amanpour- Lizzy.
Nekudaro, inguva chete ndiyo inotaurira kana mudiki aigona kuunzwa muchiitiko nechiitiko chemberi.
About Christiane Amanpour's Hama:
ruzivo nezvekwaakabva. Vanasekuru vababa vaAmanpour ndiSeyyed Amanollah naParvin os-Saltaneh apo sekuru vake naambuya vake ndiJohn Sydney Thomas naFlorence Mary.
Zvishoma kwazvo kana pasina zvinyorwa zviripo nezve babamunini vake naamaiguru pamwe nevakoma nevanin'ina vake.
Christiane Amanpour Hupenyu hweMunhu:
Chii chinoita kuti Christiane Amanpour ave mukobvu? Gara kumashure apo isu tinokuunzira iwe kugadzirwa kwehunhu hwake. Unoziva here?… Horoscope yake musanganiswa weCapricorn Zodiac maitiro. Pachinyorwa ichi, Christiane Amanpour ndiye mhando uyo anoda chinzvimbo uye anorangwa mukubata kwake.
Zvinokufadza iwe kuti uzive kuti maBritish-Iranian anoda mabwe. Iye anogara achimupfekedza yake Iranian Ndarama zvishongo uye mabhengi, dzimwe nguva paTV.
Christiane Amanpour's Hobby:
Munyori weCNN akafumura kuti nguva yake yekutasva ndeye Kutasva bhiza. Zvinoshamisa kuti aive adzidza kukwira bhiza kubva kune aimbove Iranian Army colonel.
Christiane Amanpour Mararamiro:
Iyo Net Kukosha kwaChristiane Amanpour inofungidzirwa kunge iri mari inokwana yemadhora 12.5 mamirioni (2020 manhamba).
Kwayakafuma hupfumi hwayo kunonyanya kubva mukutapa. Sezvineiwo, Amanpour anowana muhoro wepagore we $ 2 mamirioni neCNN. Anorarama hupenyu hwoumbozha pamwe nemari yaanotambira.
Christiane Amanpour Assets:
Mutori wenhau weBritish-Iranian ane imba yemhando yepamusoro pamwe nemotokari dzinoverengeka dzinodhura. Sezvo anga achinyanya kushanda munzvimbo dzakakanganiswa nehondo nematambudziko, Amanpour ndiye mhando ane rudo rukuru rwekutenga mota dzehondo, dzaanoshuvira kuchengetedzwa kwake munguva dzenjodzi.
Christiane Amanpour Untold Chokwadi:
Kuputira yedu prosopography, hezvino zvimwe zvisinganyatso kuzivikanwa chokwadi nezvake zvingakubatsira iwe kuti uzere mufananidzo wakazara wemunhu wake.
Chokwadi # 1: Nzvimbo Yakaomarara Yechitendero:
Iyo nyaya inonetsa kumashure kwehupenyu hwechitendero hwaAmanpour ndeyekuti; iye akazvarwa kuna amai vechiKristu uye baba vechiShiite vechiMuslim. Murume wake aive muJuda -America uye muJudha nechitendero. Ipo mhuri yake yaigara muIran, aipinda chechi yeKaturike muTehran. Asingakanganwe, akaendawo kuchikoro cheKaturike.
Nezvikamu izvi zvese, mubvunzo mukuru ndouyu ... Chii chinonzi Christiane Amanpour chitendero? Chokwadi ndechekuti, haatore divi rezvimwe zvitendero zvitatu.
Nekufamba kwenguva, akaita ongororo yakadzama uye akaona kuti zvitendero zvese izvi zvakanongedzera tateguru mumwe chete - Abraham. Zvisinei, rondedzero yakawanda ine kuti iye muKristu uye achiri kuenda kumisasa nguva imwe neimwe yaanowana mukana wekudaro.
Chokwadi # 2: Zviitiko Zvemangwanani uye Kushaikwa Kwekurara Kwakareba:
Christiane Amanpour akaburitsa pachena kuti haarare kwenguva refu. Anononoka kurara uye vese iye nemwanakomana wake vanomuka nekukurumidza se7 am mazuva ese. Mushure meizvozvo, ivo vaviri vanoteerera NPR Nhau kutepfenyura uye pakupedzisira vanogadzirira kusiya imba kuenda kubasa uye chikoro kuma8 am
Chokwadi # 3: Trivia:
Utapi venhau hachisi chinhu chega icho Christiane Amanpour akanaka pachiri. Kune zvinyorwa, akaonekwa mune mashoma mafirimu anozivikanwa. Mafirimu aChristiane Amanpour anosanganisira Iron Man 2, Pink Panther 2, uye chikamu cheGilmore Girls.
Isu takagadzirira tafura kuti ikubatsire iwe kuwana pfupi uye nekukurumidza ruzivo nezve Christiane Amanpour.
Zita rizere: Christiane Maria Heideh Amanpour
Zuva rekuzvarwa: 12th January 1958
Nzvimbo Yokuzvarwa: Kurovera, London
Baba: Mohammad Taghi Amanpour
Amai: Patricia Anne (née Chikomo)
Vanun'una: Lizzy Amanpour (hanzvadzi)
Mumwe: James Philip Rubin (Ex-murume)
Vana: Darius John Rubin (Mwanakomana)
Basa: mutapi wenhau
Nebasa: $ 12.5 Million
Mutengo wegore negore: $ 2 Million
kukwirira: Mumamita - 1.71m
Kumakumbo - 5 ′ 7 ″
Weight: Mu Kilogram - 65 kg
Mapaundi - (141 lbs)
Iyo memoir yaChristiane Amanpour yakaita kuti isu tinzwisise kuti kutsunga zvirokwazvo, kumutsa-kumutsa kune kuda kwevanhu.
Iye, pasina kukahadzika, anokurudzira vazhinji vadiki uye vasingatyi vatapi venhau vechikadzi vatinoona nhasi kumahondo ehondo. Amanpour akatarisa kupfuura hupfumi hwevabereki vake ndokuenderera nekuisa hupenyu hwake panjodzi kuti ave zvaari nhasi.
Mutori wenhau weBritish Iranian zvechokwadi amuwanira kodzero yekuve pakati pevane gumi vanozivikanwa kwazvo veTV. Chekupedzisira, yedu vhezheni yehupenyu hwake nyaya kuparara kwe Britanicca's vhezheni yeAmanpour's Biography.
Nomutsa isa zvaunotaura kana kutibata nesu kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino. Zvikasadaro, tiudze zvaunofunga nezvaChristiane.